Ducadii dhiigga Masiixa. ? Carruurta iyo ilaalinta
9 Akhriska Min
Salaadda dhiigga Masiix. Waxaa ka mid ah dhammaan waxyaabaha aan ku leennahay kaniisadda katooliga, dhiigga Masiixu waa mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan waana sababtaas tan jirta duco in dhiigga Masiix.
Waa shey wali nool ilaa maanta maxaa yeelay wali wuxuu ku jiraa gacanta dhaawacan ee sarakicii Ciise Masiix. Rumaysadkeenu wuxuu sii ilaaliyaa sawirka Ciise oo ah iskutallaabta dusheeda oo uu dhiiggu ku daato jacaylka aadanaha.
Wax alla wixii codsi ah oo aan barinno, waxaan aaminsanahay in dhiigga xoogga badan ee Masiixu leeyahay awood ku filan oo na siisa waxa aan dalbaneyno.
Salaadda meel kasta ayaa lagu samayn karaa oo waxa keliya ee loo baahan yahay waa in la lahaado iimaanka in mucjisada nala siiyay.
1 Tukashada dhiiga Masiixu ma xoog badan tahay?
1.1 Salaadda dhiigga Masiixa ee carruurta
1.2 Tukashada dhiigga Masiixa ee xaaladaha adag
1.3 U soo duceeya dhiiga masiixa inuu ka saaro dhibaatooyinka
1.4 Ka badbaadinta dhiiga Masiix
1.5 Salaada maalin walba
Tukashada dhiiga Masiixu ma xoog badan tahay?
Dhammaan salaadda ilaahay waa xoog badan yihiin.
Hadaad rumaysad ku tukatid waxaad helaysaa waxkasta oo aad raadineysid.
Rumayso oo rumayso awooda Rabbigeenna Ciise Masiix.
Salaadda dhiigga Masiixa ee carruurta
Oh aabahay, waxaan u imid inaan ku baryo oo aan kaa baryo inaad codkeyga maqashid, waan dhibtooday, shafeeceysaa si wiilkeygu uga fogaado shirkad xun oo uusan ku dhicin isticmaalka daroogada, aalkolada, ayuu mar kale ku biiraa Iskuul, waxaan kaa codsanayaa qalbigayga oo dhan xagga awooda dhiiggii Ciise Masiix, Sayidow, isaga mar labaad nin wanaagsan sii.
Sayidow, Aabaha jannada, nadiifi nafta wiilkayaga, ka nadiifi xumaanta, nacaybka, xanaaqa, cabsida, murugada, kalinimada, murugada iyo xanuunka ... dhiiggaaga, waxaan kaa codsanaynaa inaad isaga u beddesho qof jecel dadka kale , Farxad, xasilloonaan leh, naxariis leh, aan cabsi lahayn, oo gudbisa jacayl, murugo la'aan, sameynta ruuxa ku ilaaliya dhiigaaga qaaliga ah.
Ilaaha naxariista leh, adigu wax walba waad ogtahay, waxaadna arkeysaa wax walba, waxaad na siisaa xigmad maxaa yeelay waxaan nahay waalidkii waxaan nahay waxaanan dooneynaa inaan fiicnaano, iga caawi inaan is fahano, waan ognahay da'daadu sida ay tahay iyo waqtigaas inay xasilloon yihiin iyo / ama caasiyiin.
Oh, dhiigga barakeysan ee Ciise Masiix ayaa ku daadiyay Ciise, wiilkayaga, dhiiggaaga barakeysan iyo kan daahirinta, si ay isaga u siiso xoog.
Waxaan kaa baryayaa inaad iga qoto dheer tahay jiritaankayga.
Waad u tukan kartaa baryada dhiigga Masiix ee carruurta leh cunuggaaga.
Caruurta leh waxyaabaha ugu quruxda badan ee nagu dhici karay. Ma miraha jacaylka waxaana ka helnaa aduunkan farxad buuxda oo aamin ah kalsooni buuxda in waxkasta ay ku shaqeyn doonaan nolosha.
Laakiin waxaa jira wakhtiyo annaga, waalid ahaan, aan u helno waayo-aragnimo aan noolaan karin oo ah markii aan dhiigga qaadi karno Masiixa Waxay noqotaa rajadeenna keliya.
Weydiinta carruurteenna waa ficil geesinimo leh oo jacayl aan ku sameyn karno.
Tukashada dhiigga Masiixa ee xaaladaha adag
Dhiiga barakeysan ee ciise masiixi! Is qaadsiin, dad iyo dhiig rabaani ah, i maydh, nadiifi, i cafi, wejigaaga iga buuxi; Sifaynta dhiiga oo aad siiso xoog, waxaan kugu jeclahay joogitaankaaga qadiimiga ah meesha allabariga, waxaan rumeynayaa awoodaada iyo macaankaaga, waxaan kugu kalsoonahay inaad iga ilaalinayso shar kasta oo waxaan kaa codsanayaa qoto dheerida aan ahay: naftayda gal iyo Nadiifi, qalbigayga buuxi oo gub.
Dhiig qaali ah oo daadanaya iskutallaabta iyo ku tuurista qalbiga cibaadada ee ciise, waxaan kuu sujuudayaa oo aan kuu bixiyaa cibaado iyo kalgacal, waxaanan kuugu mahadnaqayaa Rabbi Dhiigaga iyo Noloshaada ilaahay mahadii waxaan badbaadinay oo waxaan helnay difaac kahor Wax walba oo xun ayaa nagu xeeran.
Oh Ciise, kan i siiyay hadiyadda qaaliga ah ee dhiigaaga, iyo Kalgari, isagoo dhiiranaan iyo deeqsinimo badan leh, waad iga nadiifisay wasakhdii oo dhan, oo waxaad ku dartay qiimaha madaxayga; Ciise Masiix, kii meesha allabariga ku noolu waa noloshayda, waxaad nolosha la xiriirtaa, waxaad tahay isha dhammaan nimcooyinka la yaqaan, iyo hadiyadda weyn ee Eebbe carruurtiisa u leeyahay, waxaad tahay tijaabada iyo ballanqaadka jacaylka daa'imka ah annaga.
Waxaan bogaadinayaa dhammaan fursadaha aan ku badbaadiyey oo aan ku ilaalinayay xooggaaga iyo xooggaaga, kaas oo igu sii adkaynaya xaqiiqnimada fahamka buuxda ee daciifnimadeyda, nuglaanshahayga iyo kartidaada aad iga ilaalinayso xumaanta igu hareereysan, Quruxda ibliis ee had iyo jeer ina xidha awoodaha iyo awoodaha aan ka baxno.
Waad ku mahadsan tahay inaad tahay Dhiig Boqortooyada ka badbaadiya nolosheena mugdiga iyo qalabka sharka oo inta badan u yimaada inay na dhibaateeyaan.
Dhiiggii Masiixu wuxuu soo ifbaxay daqiiqaddii uu naftiisa u bixiyay jacaylka aadanaha iyada oo ku jirta xoogga Ilaah uu xoogga saarayo inuu na siiyo mucjisooyinka aan u baahan nahay.
Waxay noqon karaan codsiyo adag. Mucjisooyinka dhabta ah oo kaliya awoodda ka sarraysa ay ku dhaqmi karto taasina waxay noqon kartaa awoodda dhiigga Masiix.
Salaaddan waxaa lala wadaagi karaa qoyska ama saaxiibka, waxa ugu muhiimsan waa inaan ogaano inay tahay inaan rumeysanno, taasi waa waxa damaanad qaadaya in salaadu wax ku ool tahay.
U soo duceeya dhiiga masiixa inuu ka saaro dhibaatooyinka
Dhibaatooyinka, inta badan kiisaska, ayaynu ku hoydaan oo way ku dhibayaan. Waxaan seexanaa habeenno hurdo la’aan ah oo keliya ka fikirka xaaladda dhibku jiro ee ina heysa tanna waxay noo keentaa cawaaqib jireed oo naxdin badan.
Awood u yeelashada ka saarista dhibaatooyinkeena banaanka ah, guryaheena iyo xitaa banaanka ehelkaaga waa ficil lama huraan ah tanina awoodii dhiiga Masiixa ayaa naga caawin karta.
U soo ducee codsikan qaaska ah oo rumaysta in jawaabta Rabbigu ku socoto jidkeedii.
Ka badbaadinta dhiiga Masiix
Rabbi Ciise, magacaaga, iyo xoogga dhiiggaaga qaaliga ah waxaan ku xidhnaa qof kasta, xaqiiqooyin ama dhacdooyin kasta oo cadowgu doonayo inuu na waxyeeleeyo.
Awooda Dhiiga Ciise waxaan ku shaabadeynaa dhamaan awoodaha wax baabi'iya hawada, dhulka, biyaha, dabka, dhulka hoostiisa, xoogaga shaydaanka ee dabeecadda, qoto dheer cadaabta, iyo dunida taas oo aan maanta ku dhaqaaqi doonno.
Awoodda dhiiga Ciise, waxaan ku baabi'innaa faragalinta iyo ficilka kan sharka leh.
Waxaan weydiisaneynaa Ciise inuu u diro gabadha barakeysan guryaheena iyo goobaheena shaqada oo ay weheliso Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael iyo dhamaan maxkamadiisa Santos Angeles.
Awoodda dhiigga dhiigga Ciise waxaan ku xidhnaynaa gurigeenna, dhammaan kuwa deggan (mid kasta magacooda), dadka uu Rabbi u diri doono, iyo weliba cuntada, iyo badeecadda uu si deeqsinimo leh noogu soo diro annaga cunno
Awooda dhiiga Ciise waxaan kuxiraa dhulka, albaabada, daaqadaha, walxaha, darbiyada iyo sagxadaha, hawada aan ku neefsaneyno iyo iimaan waxaan ku dul wareejinay wareegtadiisa dhiigiisa qoyskoo dhan.
Awoodda dhiigga dhiigga Ciise waxaan ku xidhnaynnaa meelaha aan maanta joogno, iyo dadka, shirkadaha ama hay'adda aan la macaamili doonno (mid walba magacooda ha u magacowdo).
Awooda dhiiga Ciise waxaan ku xidhnaynaa agabkeena iyo shaqadiisa ruuxiga ah, ganacsiyada qoyskeena oo dhan, iyo gawaarida, wadooyinka, hawada, wadooyinka iyo nooc kasta oo gaadiid oo aan adeegsan doonno.
Dhiigaaga qaaliga ah waxaan ku xidhnaynaa ficilada, maskaxda iyo quluubta dadka deggan oo dhan iyo hogaamiyaasha dalkeena hooyo si ay nabadda iyo qalbigaagu ugu dambayn ugu xukumaan.
Waxaan kuugu mahadnaqaynaa Eebbe dhiigaaga iyo noloshaada, sababtoo ah iyaga ayaan ugu mahadcelinnay waana naga badbaadnay shar kasta.
Baryadan ilaalinaysa dhiiga Masiix waa mid aad u xoog badan!
Waxaan weydiisan karnaa in dhiiga xoogga leh ee Masiixu uu inagu daboolo sida gogol ilaalin oo nagu wareegsan si kan sharka leh uusan noo taaban. Midkeenna ama dhallaankayaga iyo midkoodna qoyskeenna iyo saaxiibbadeenna midna kuma aannu noqon.
Sidii ayey ku dhacday axdiga cusub taas oo dhiig ku daadisay sagxadda guryaha calaamad u ah badbaadin, sidaas oo kale rumaysad ayaan maanta ku weyddiinaynaa Dhiigga Masiix wuxuu ku yaal albaabka guryaheena iyo annaga iyo naga ilaali xumaanta oo dhan.
Salaada maalin walba
Ilaahayow, i caawi, Sayidow, dhaqso ii caawi.
Waxaan baryayaa ilaalinta xoogga leh ee Bixinta Bixiyaha qaaliga ah ee Masiixa, Boqorka adduunka iyo Boqorka boqorrada.
Magaca Ilaaha Aabbaha ah, oo ku jira magaca Ilaah Wiilka iyo magaca Ilaah ee Ruuxa Quduuska ah: oo leh xoogga dhiigga Ciise Masiix ee ah Sayidkayga, waxaan shaabadeeyaa oo ilaaliyaa, ilaaliyaa oo xiraa, miyirkayga, miyir-qabka, miyir-qabka, sababtayda, wadnaheyga, dareenkeyga, dareenkeyga, jir ahaanteyda, maskaxdeyda, maankayga iyo ruuxigeyga.
Wax kasta oo aan ahay, wax kasta oo aan haysto, wax kasta oo aan karo, wax kasta oo aan aqaan iyo wax kasta oo aan jeclahay waa la iga shaabadeeyey oo lagu ilaaliyaa awoodda dhiigga Ciise Masiix Sayidka. Ilaahayow, i caawi, Sayidow, soo dhaqso oo i caawi.
Waxaan xirayaa wixii tagay, mustaqbalkeyga iyo mustaqbalkeyga, waxaan shaabadeynayaa qorshayaasheyda, himilooyinkeyga, riyooyinkeyga, riyadayda, wax walba oo aan qabto, wax walba oo aan bilaabo, wax walba oo aan ku fikiro ama sameeyo, sifiican ayaa loo shaabadeeyay loona ilaaliyaa awooda dhiiga ciise masiix Rabbi. Ilaahayow, i caawi, Sayidow, soo dhaqso oo i caawi.
Waxaan shaabadeeyaa shaqsigayga, reerkayga, hantideyda, gurigayga, shaqadayda, ganacsigeyga, geedka reerkayga, kan ka hor iyo ka dib, wax walbana waa la shaabadeeyey oo la ilaaliyay, iyada oo la adeegsanaayo Awooda dhiiga Ciise Masiix Sayidka.
Waxaan ku dhuuntaa nabarka dhinaciisa dhaawaca ah ee Ciise, waxaan ku qariyey qalbiga aan xasilloonayn ee gabadha barakeysan ee Maryan, si aan cidina iyo qofna iigu saameyn karin xumaantooda, hadalkooda xun iyo falimahooda, iyo hamigooda xun ama khiyaanooyinkooda, si uusan qofna waxyeello iigu geysan nolosheyda shucuurta, dhaqaalaheyga, caafimaadkeyga, jirradooda, iyo masayrkooda, indhahooda xun, xanta iyo cayda, ama sixir, caajis, caajis ama hexes.
Jidhkayga oo dhan waa la shaabadeeyey, wax kasta oo hareerahayda ah waa la shaabadeeyey, oo anigu ……. Waxaan weligey ku ilaashanahay Dhiigga Qaaliga ah ee Bixiyeheenna.
U ducee Rabbiga duco dhiigga Masiix ee maalin kasta leh iimaan weyn.
Tani waa caado ina caawisa inaan sii haysano aaminaada qoyska sidoo kale aan ku xoojino midnimada jirka iyo ruuxiga xubin kasta.
Waa la samayn karaa subaxa hore si loo soo bandhigo maalinta cusub ka hor joogitaanka Ilaaha xoogga badan oo dhan. Waad sameyn kartaa jumlad sagaal-maalmood oo xukun ah ama sameyn kartaa ducooyin iskiis ah. Waxa muhiimka ah ma aha in la joojiyo.
Waxaa jira da 'ay u muuqato in iimaanku aad u fududahay in la jebiyo waana wakhtiyadaas salaadaha maalin walba bilaabmaan inay midho dhalaan. Weydiista in dhiiga Masiix, maalkeena lagu barakeeyo waa muhiim oo xoog badan.
Had iyo jeer aaminsanaanta in dhiigga ducada Masiixa uu leeyahay awood.